Wasiirka arrimaha dibada oo balanqaadday in ay dowladu wax u qabaneyso dhalinyarada ku dhibaateysan dibadaha – idalenews.com
Wasiirka arrimaha dibada oo balanqaadday in ay dowladu wax u qabaneyso dhalinyarada ku dhibaateysan dibadaha
R/wasare ku xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Marwo Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa sheegtay in dowladu wax ka qabaneyso dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ku heysata dalalka caalamka.
Marwo Fowziyo oo la hadashay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar ayaa balan qaaday in dowladu wax ka qabandoonto dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira jeelasha wadama caalamka gaar ahaan kuwa ku jira xabsiyada Masar, dhalinyarada loo diiday in ay Masar ku diyaariyaan Masterka, iyo kuwa Turkigu geeyay Masar ee loo diiday waxbarashada.
Sidoo kale marwo Fowziyo wasiirka arrimaha dibada ahna R/wasaare ku xigeen waxeey ku boorisay jaaliyada Soomaaliyeed in ay gacan ka geystaan dib u dhiska dalka iyo horumarintiisaba, iyadoo ugu baaqday dadka tujaariinta ah in ay maalgashadan dalka, iyadoo xustay in dowladu ay dhiirigelineyso arintaasi.
Wasiirka arrimaha dibada ahna R/wasaare ku xigeenka ayaa hadalkan ka jeedisay xaflad ay soo qabanqaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar taas oo ka dhacday magaalada Qahira, waxaana halkaasi khudbad qiimo badan ka jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Kenya oo lagu amray inay Ciidamo kala baxdo Somalia